Isixhobo soLwimi lwesiFunda, isixhobo seelwimi zasemaphandleni, iincinci zeelwimi izixhobo.
Izixhobo zethu zeelwimi zamahhala ziyahluka kumsebenzi wokuguqulela. Iziqulatho zewebhu ziguqulelwa. Kodwa ii-URL zewebhsayithi ziNgesi ezingakhange ziguqulelwe kwezinye iilwimi. Isixhobo sethu seelwimi sinika isisombululo sehlabathi jikelele.
ii-URL zewebhusayithi ziNgesi. Ngoko, abantu abangengesiNgesi, abasemaphandleni nakwimimandla abakwazi ukuvula iiwebhsayithi. Isixhobo sethu seelwimi sihle kakhulu kubo.
Abasebenzisi beelwimi bezizwe baya kufumana iphepha lewebhu ngokunceda nabani na kanye kuphela
2. Emva koko banokuvula iiwebhusayithi ngesixhobo sethu, ngesandla sabo
3. Baza kuluhluza kwidilesi ye-bar ppooii Ctrl + Faka indawo iya kuvula okanye ooiiuu.com njl (naziphi na izitshixo 3, ngasekunene ngakwesobunxele, kabini, ezidibeneyo kwikhibhodi.)
4. Ulawulo kunye nabanikazi bewebhu kufuneka banamathele ikhowudi yethu kwiwebhusayithi
Izixhobo zethu zoLwimi zisebenza njengolu hlobo kwiwebhu.
1. Kopisha kwaye unamathisele ikhowudi kwi --body-- tag kwiwebhusayithi yakho kwaye ulayishe
2. Vula iwebhusayithi yakho kwisiphequluli sakho kwithuba elilodwa emva kokufaka ikhowudi
3. Ngoku uthayiphe kwi-bar bar ppooii.com okanye (ooiiuu kunye neCtrl + Enter) njl. Bona umfanekiso weskrini
Isixhobo sethu seelwimi sisebenza ngokulandela abantu.
1. Kopa udidi kwibharnesi ye-bar ppooii.com okanye (ooiiuu kunye neCtrl + Enter) njl. Bona umfanekiso weskrini
2. Naliphi na izicwangciso ezi-3, ngakwesobunxele, ngokuphindwe kabini, ezidibeneyo kwikhibhodi